« Tsy ny vary no very fa i Madagasikara »: « Film », misarika handray andraikitra… | NewsMada
« Tsy ny vary no very fa i Madagasikara »: « Film », misarika handray andraikitra…
Ny asabotsy 21 jolay teo, nalefa tao amin’ny Scandale Buffet Ankorondrano ilay sarimihetsika « Tsy ny vary no very fa i Madagasikara ». Tantara ahitana tranga samihafa maneho ny fahasimban’ny fiarahamonina eto Madagasikara. Maneho ny tsy mety sy mila harenina haingana eto amin’ny firenena, toy ny vaky fasana, ny fivarotantena, ny halatra maro samihafa, ny fitsaram-bahoaka, sns.
Manoloana ireo rehetra ireo, manasongadina sy misarika ny olom-pirenena tsirairay handray andraikitra ity sarimihetsika « Tsy ny vary no very fa i Madagasikara » ity. Havoitran’ny tantara ny fananan’ny Malagasy soatoavina nafonja tokoa tany amin’ny Repoblika voalohany. Nanjaka tanteraka ny firaisamonim-pirenena sy ny fihavanana. Nandray andraikitra tamin’ny manodidina azy avokoa ny rehetra…
Teo amin’ny fitantanam-panjakana indray, tsy nitsahatra nikatsaka izay nahasoa ny vahoaka ny filoha Tsiranana Philibert. Rava avokoa anefa ireo rafitra napetrany tamin’ny taona 1972. Nihapotika nanaraka izay ny fandrosoan’i Madagasikara. Teo no nanehoany an-tsary sy an-tsoratra ilay hoe « Tsy ny vary no very fa i Madagasikara ».
Notontosaina teto Antananarivo sy tany Mahajanga ny tantara. Ny Voltage production niaraka tamin’ny antokoa PSD no namokatra azy ary i Eliana Bezaza (zafikelin’ny filoha Tsiranana Philibert, sekretera nasionalin’ny antoko PSD) ny mpilalao fototra. Ny 28 jolay izao, halefa ho an’ny rehetra ao amin’ny Cinéma Ritz ity « film » ity ary hoentina hitety faritra aorian’izay.